ပဲပြုတ်ထမင်းစားပြီး ရေနွေးလေး သောက်ချင်လိုက်တာ.. ရှလွတ်..:D
ပုံကို ကြည့်ရတာ ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြုတ်တဲ့ပဲကို ပိုကြိုက်တယ်.. ၀ယ်စားတဲ့ ပဲပြုတ်အတိုင်းပဲ.. :) ပဲပြုတ်သည်ကြီး ရောင်းကောင်းပုံရတယ်.. ဘယ်လောက်မြတ်လဲ.. ? :D
နိုင်ငံခြားမှာ စားတတ်ရင်လုပ်တတ်ရမဟဲ့ ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့သွားကြတယ်ဆိုဘဲ တို့တော့မပါ
လက်ရည်တက်လာတေသာကြောင့် ဒု ပဲပြူတ်ပိုကောင်းပုံရသည်။
ညီမရေ.. အစ်မပြုတ်တာ အခွံတွေကျွတ်ထွက်တယ်။ ရေများလို့လားမသိဘူး။ အကြံပေးပါအုံး။
စမ်းကြည့်အုံးမယ် အစ်မရေ..ကျေးဇူးပါ. ပဲပြုတ်နည်းလိုက်ရှာနေတာနဲ့ အတော်ပဲ. အိမ်မှာလည်း ပဲစိမ်းတစ်ထုတ်ဝယ်ထားတာ ဘယ်လိုပြုတ်ရမလဲမသိတာနဲ့ ဒီတိုင်းထားထားတာ.
လုပ်တတ်ရုံတင် မကဘူး။ ပြင်လည်း ပြင်တတ်တယ်နော်။
(၁)ပဲ ကို ရေ အူမုတ် ၁ ရက် အတိ စိမ် ပါ
(၂)ရေ မှ ဆယ်ူပီး ၂-၃ ရက် တိတိ ရေ ၀တ် အုပ်ထားပါ
(၂) ပဲပြုတ် တခွက် ရေ တခွက်ခွဲ ထည်. ပါ
(၃) rice cooker နဲ. ချက်လို. ရပါတယ်
(၄) ချက်နေတုန်း အိုး ပေါ မှာ လေးတဲ. အရာနဲ. ဖိထားပါ
(၅)baking soda + ထန်းလျက် သိုုကံသကာ သြိုုကာညို (dark soy sauce) နဲနဲ ထည်.ပါ
(၄) အခွံမကျွတ်အောင် rice cooker ထဲ က ပဲ တွေကို bounty or thin clothes နဲ. အုပ် ထာုးပီး ချက်ပါ.
ပဲပြုတ်လေးတွေက တော်တော်တူတယ်။ ကြည့်ရတာ ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။
ကိုလူထွေး ---> ကုန်သွားပြီ~ :D
မနုစံ ---> ထောင့်ငါးရာ မြတ်တယ်ချင့် :P
မခင်ဦးမေ ---> စင်္ကာပူမှာ မြန်မာပြည်က စားစရာ အားလုံး ဝယ်လို့ရလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဝယ်မရတဲ့နေရာမှာ နေရရင် တတ်သွားမှာပါ။
မသုနှင်းဆီ ---> ပဲကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် မမွန်ရေ။ ညီမသုံးတာ white peas ပါ။
Evy ---> ပဲပြုတ်နည်းက ကိုယ်တိုင်လဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မလုပ်တတ်တာမို့ မရေးလိုက်တာ။ အင်တာနက်ထဲလိုက်ရှာရင် အများကြီး ထွတ်လာပါတယ်။ ကိုယ်သုံးတဲ့ပဲပေါ်မူတည်ပြီး ရေထည့်တာလဲ ကွာတယ်ထင်ပါတယ်။
မစန္ဒကူးမေ ---> ခုလုပ်ထားတာ အိန္ဒိယကလာတဲ့ white peas နဲ့ပါ။
ကျော်နှင်းဆီလွင် ---> それほどでもないですよ。:)
မရီတာ ---> ဓာတ်ပုံရိုက်မှာမို့ ပြင်ထားတာပါ။ :D
မမြတ်လေးပန်း ---> ပဲပြုတ်နည်း ရေးပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီမက ပဲပြုတ်အိုးထဲ ဆော်ဒါမထည့်လို့ထင်တယ် ဝေမကျပါဘူး။
မပုံရိပ် ---> ကျေးဂျူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Maung Z.H. Aung said...
I'm just wondering if anybody know how to call this pea in English?
Sorry for typing in English, I don't know how to type in Burmese. Thanks.
mama ---> 日本語にないと思います。カタカナでホワイトピースと言ってオンラインから買えます。私買ったのと同じ商品のリンクです。